जापानले फुटबल विश्वकप जित्ने यस्ताे छ सय वर्षे याेजना – www.agnijwala.com
जापानले फुटबल विश्वकप जित्ने यस्ताे छ सय वर्षे याेजना
सन् १९९१ मा जापानको फुटबल र्यांक तल थियो । जापान फुटबल संघ र फुटबलका सौखिनहरुले फुटबलमा अघि बढ्न केहि गर्नुपर्ने निर्णय गरे ।
जापानले ‘जे लिग’ सञ्चालन गर्ने भयो । जापानसँग आफ्नौ व्यवसायिक फुटबल लिग छ । जसलाई एशियाकै उत्कृट लिग बनाउने सपना देखेका थिए । लिगलाई सफल, दीगो बनाउँदै सय भन्दा बढि फुटबल क्लब जन्माउने र अन्त्यमा सन् २०९२ को फुटबल विश्वकप ट्रफी चुम्ने लक्ष्य लिएका थिए । यो उनिहरुको सय वर्षे ‘भिजन’ हो ।
जापानमा सुमो रेस्लिङ र बेसबल एकदमै खेलिने खेल हो । जापानमा फुटबल चम्किएको ३० वर्षभन्दा बढि भएको छैन । जे लिगको चर्चाले उचाई निर्माण गर्दैगर्दा सरकारको तत्परता, उपस्थिती र लगानी छायाँमा पर्यो । र चर्चा ओराले लाग्दै गयो । अन्ततः सौखिन नै रह्यो ।
लिग सुरु गर्दा जापान फिफा फुटबल र्याङ्किगंमा ४० औ स्थानमा थियो । घरेलु मैदानमा दर्शकको उपस्थिती एकदमै कम हुन्थ्यो । जे लिग सुरु गर्दा एशियाली अर्थतन्त्र ढुलमुले अवस्थामा थियो । महत्वाकाक्षी क्लबहरु आकर्षित भएका थिए । विश्वप्रख्यात ब्राजिलियन फुटबलर अबलेटी खेल्नका लागि तयार भएका थिए । साथै फुटबलर जिको, डुगां र गेरी लिन्कर पनि समेटिन इच्छुक देखिएका थिए । नामुद खेलकौशलले सुसञ्जित खेलाडीमार्फत् लिगको गुणस्तरियता बढेको थियो ।
लिग सुरु भएको तीन वर्षमा जापानको र्याकिंग २१ मा उक्लिएको थियो । र दर्शक पनि हप्तमा २० हजारसम्म पुग्ने गरेका थिए । लिग राम्रो हुँदै थियो । सन् १९९७ मा आर्थिक संकट आइलाग्यो । दर्शक पनि कम हुँदै गए । क्लबका स्पोन्सर कम्पनी पनि हात झिक्दै गए । चेतावनीका संकेतहरु देखिन थाले । र लिग बोर्डले योजना बनायो । छोटो समयका लागि सहयोग होइन कि सुदुर भविष्य निर्माण गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो ।
लिग बोर्डले अर्को आर्थिक संकट टार्नका लागि सामुदायिक सहभागिता, उनिहरुसँगको साझेदारी, साना कम्पनी र तल्ला तहका एकेडेमीहरुसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसबाट युवापिढीलाई खेलप्र िझुकाब बढ्ने, सहभागितामा प्रोत्साहित गर्ने र दर्शक संख्या बढाउन प्रवद्र्धन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनिहरुले दुई तहको लिग फरम्याट बनाउने ठोसा योजना बनाए । राष्ट्रको महत्वाकाक्षी योजनालाई अझै नजिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यो समयमा टप टायरमा १६ क्लब र दोस्रोमा १० थिए । अहिले पहिलो लिगमा १८ र दोस्रो लिगमा २२ क्लब आवद्ध भएका छन् । यो नाप्न सकिने सफलता हो ।
एशियन च्याम्पियन लिगमा पहिलो लिगका टिमले महादेशिय अन्य ठूला क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ । लिगको जन्म र हुर्काइसँगै जापानको राष्ट्रिय टीमले रसियामा आफूलाई बलियो टीमको रुपमा देखाउनुका साथै खेलकौशल प्रकाशका ल्याइरहेको छ ।
सन् १९९८ देखि जापानले लगातार विश्वकप खेलिरहेको छ । सन् २०१३ को कन्फेडेरेसन कपमा जापानले इटालीविरुद्ध खेलेको खेल आज पनि तारिफयोग्य रहेको छ । जसले संसारभर जापानी फुटबलको प्रशंसक ह्वात्तै बढेको थियो । इटालीका अनुभवी मेनेजरले जापानी टीमलाई लयमा ल्याएका थिए । जापानको सामुराईले खेलेको खेलले नयाँ फुटबल तारा जन्माएको भान गराएको थियो ।
जापानका खेलाडी केइसुके होन्डा, शिन्जी कागावा र शिन्जी ओकाजाकी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चम्किरहेका छन् । यरोपका क्लबहरुमा ती खेलाडीहरु महंगा सावित भइसकेका छन् ।
जापानका खेलाडी होन्डाको अहिले चर्चा भइरहेको छ । त्यस्तै अर्का खेलाडी हिदेतोसी नाकाता जसले युरोपियन फुटबलमा जापानको प्रभाव छाड्न सफल भएका थिए । वालोन डेओरका लागि तीनपटक सिफारिश भएका थिए । उनि सन् २००४ मा फिफाका एक सय राम्रा खेलाडीको सूचिमा परेका थिए । जसलाई महान खेलाडी पेलेले छानेका थिए । जापानका डेभिड बेकह्यामको उपाधिसमेत उनले पाएका थिए ।
जापानले सन् २००२ मा विश्वकप खेलेपछि रंगशालाहरु नयाँ बनाइएको थियो । ४० हजार दर्शक क्षमताका रंगशाला निर्माण भएका थिए । विश्वको नक्सामा जापानको फुटबल कोरिएको छ । तर प्रश्न यो पनि छ कि कहिलेसम्म ?
जापानले सन् २०९२ मा विश्वकप फुटबल जित्ने सपना पुरा हुन धेरै वर्ष बाँकी छ । उनिहरुले आफ्नो गृहकार्य पुरा गर्दै लगेका छन् । एकसय भन्दा बढि व्यवसायिक क्लब बनाइसकेका छन् । सफलता एकैरातमा प्राप्त हुने चिज होइन । तसर्थ जापान फुटबल संघले दुरदृष्टिसहित आफ्नो पाइला चालिरहेको छ ।
राष्ट्रिय खेल विस्तारै सुधार भएको छ । गुणस्तर र परिचित हुँदै छ । आन्द्रेस इनिस्टाले जापानी फुटबलमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् । यो जापानको लागि ठूलो अवसर हो । १८ वर्षमुनिका जापानका खेलाडी युरोपमा नामुद फुटबल एकेडेमी प्रशिक्षणका लागि जाँदैछन् । यो आशावादी र सुन्दर भविष्य निर्माणको एक महत्वपूर्ण पहलकदमी हुनेछ ।
सपना पुरा हुन धैर्यता, खेलाडीको वृत्ति विकासको ख्याल गर्दै आडभरोसा, हौसला हेरचाह, भरणपोषण गर्न सक्नुपर्छ । जुन बाटो जापानले समात्नेछ । सफल, दीगो र फुटबल पिरामिड बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
जापानः फुटबल विश्वकप विजेता, कहिले ? कसलाई थाहा छ ? तर तपाईँले पहिलोपटक सुन्नुहुनेछ ।